Matongerwo eNyika, 17 Kurume 2018
Mugovera 17 Kurume 2018
Vana Chiremba Vanoti Hapana Kuwirirana Kwavaita neHurumende
Vana chiremba vari kuaramwa mabasa vanoti hachisi chokwadi kuti vawirirana nehurumende, uye kuramwa kwavo mabasa kuri kuenderera mberi chero hazvo hurumende yakabuditsa mashoko ekuti vanachiremba navana mukoti vanga vachiramwa mabasa vadzokera kumabasa.
VaRamaphosa Vanosangana naVaMnangagwa muHarare
Mutungamiri we South Africa, Va Cyril Ramaphosa, vasvika muZimbabwe neMugovera kuzoita hurukuro nemumwe wavo, mutungamiri weZimbabwe, VaEmmerson Mnangagwa.
Muzvare Khupe Voenderera Mberi neMusangano Wavo neSvondo muBulawayo
Musangano wakadaidzirwa nemutevedzeri wemutungamiri we MDC T, Muzvare Thokozani Khupe, uri kuenderera mberi neSvondo sekurongwa kwazvakaitwa.
VaMnangagwa Vopesana naVaMugabe Matorero Avakaita Masimba
Mutungamiriri wenyika, vaEmerson Mnangagwa, vanoti hachisi chokwadi kuti hurumende yavo haisi pamutemo sezvakataurwa nevamimbove mutungamiri wenyika, vaRobert Mugabe. VaMugabe vakaudza SABC kuti vakabviswa pachigaro nemauto.
Vashandi vebazi rezvekupinda nekubuda kwezvinhu munyika kana kuti immigration department nemusi weChishanu vakaratidzira muHarare vachiti vakuru vakuru rebazi iri avo vaimbova mapurisa vari kutyora kodzero dzevashandi uye kuita zvehuori.
Zimbabwe Inokoka EU Kuti Iongorore Sarudzo Gore Rino?
European Union, kana kuti EU, inoti yakokwa neZimbabwe kuti izoongorora sarudzo dzichaitwa gore rino.
Vakuru muHurumende Vozvidza Komiti yeParamende Mushure Mekudaidzwa
Munyori wedare remakurukota, Dr Misheck Sibanda, pamwe nemutevedzeri wavo, Dr Ray Ndhukula, varamba neChishanu kumira pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi nemamhando dzemoto kuti vape humbowo.
Vana Mukoti Vanokanda Mapadza Pasi Vachiti Mari Dzavo Dziwedzerwe
Vana mukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu munyika mose vakanda mapadza avo pasi vachiti hurumende iri kuramba ichivabata kumeso pazvichemo zvavo, izvo yakavimbisa kugadzirisa makore akawanda apfuura.
SADC Parliamentary Forum Yokurudzira Kushanda kweVatori veNhau Kwakasununguka
Mubatanidzwa wemaparamende emuSADC, weSADC Parliamentary Forum, unoti vatori venhau vanoita basa guru munguva dzesarudzo uye nyika dzese dzemudunhu iri dzinosungirwa kudzika mitemo inoita kuti vashande vakasununguka pasina kumbunyikidzwa.
Mutungamiri weSouth Africa, VaRamaphosa Voshanyira Zimbabwe
Vatungamiri vaviri ava vanotarisirwa kukurukura pamusoro pekudyidzana kwenyika mbiri idzi uye nezvimwe zvinosanganisira zvinonetsa mudunhu reSADC.